Cryptocurrency ပင်လယ် ကြီး ( Henry Aung ) - PALnet
Cryptocurrency ပင်လယ် ကြီး ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့၏ Hive ကတော့ တအိအိ ဖြင့် ပြား ၅၀ အထက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့်လည်း Hive ဈေးအား ရုတ်တရက် ခုန်တက်သွားခြင်းထက် တအိအိဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတို့ ဝင်ရောက်လာက တဖြည်းဖြည်း ဖြင့် ဈေးတက်လာသည်ကို ပိုသဘောကျပါသည်။
Hive သည် Splinterland ကြောင့် ဈေးတက်လာသည်လား / HBD ကြောင့် ဈေးတက်လာသည်လာပဲ မသိ ... ဈေးကတော့ တက်လာနေပါသည်။ မည်သို့သော အကြောင်း ကြောင့်ပင် ဖြစ်စေ လက်ရှိအချိန်တွင် Hive သည် ဈေးတက်ရန် အကြောင်းပြချက်ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်က ကဲ့သို့ ဘူဘောင်း ဆွဲတင်ခြင်း မျိုးမဟုတ်ပဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတို့က Hive အား ဝယ်ယူကာ Hive platform ရှိ Project များတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ကာ Hive အား ဈေးတက် စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Hive သည် လည်းကောင်း HBD သည် လည်ကောင်း လက်ရှိအချိန်တွင် တက်ဈေးတွင် ရှိနေပါသည်။ HBD ဈေးတက်လာခြင်း မှာ HBD saving အတိုးကြောင့် ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
Hive Engine တွင်လည်း Pizza သည် တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အမြှင့်သို့တက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အခြားသော Hive Engine token တခုမှာ StarBits ဖြစ်ပါသည်။
Hive Engine ဈေးကွက်တွင် နေ့စဉ် ဝယ်ရောင်း ဒေါ် လာ ၈၀၀၀ ကျော်ခန့်ဖြင့် Pizza / Leo / CCC တို့၏ အထက်တွင် ရှိနေပါသည်။ ယခုတလောတွင် Splinterland ခေတ်စားလာခြင်း နှင့်အတူ / StarBits / CBM / Dcity အစရှိသော token များအားလည်း စောင့်ကြည့် စေချင်ပါသည်။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ပြင်ပ Cryptocurrency ဖြစ်သော BTC / ETH / BNB တို့အား လိုက်မမှီ နိုင်တော့ပြီ ဖြစ်ရာ Hive Engine ရှိ Token များအား ဈေးအတက်အကျ ကစားကာ ပျော်မွေ့နေရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမှန် ဆိုရလျင် Hive Engine ရှိ token များကလည်း မြန်မာငွေ တစ်ကျပ် ဟူသော Token များထက် မြန်မာငွေ ၄၀ / ၅၀ / ၁၀၀ / ၂၀၀ အထက်ဟူသော Token များသာ တွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့်ကလည်း Cryptocurrency အမြှင့် Coin များအား လိုက်မမှီ သည့်နောက်တော့ မိမိကျက်စားရာ စာကျက်ဖြစ်သည့် Hive platform မှ ထွက်သော token များအား အမိဖမ်းထားရန်တော့ လိုအပ်မည်ဟုထင်ပါသည်။
မိမိ အထင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ Cryptocurrency ဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းသည် ကျယ်ပြန့်လွန်းလှပါသည်။ Cryptocurrency ပင်လယ်တွင် လက်ပစ်ကူးခြင်းထက် Hive ရေစီးအတိုင်း အသာစီးမျှောခြင်းသည် ပို၍သက်တောင့် သက်သာရှိမည်ဟုထင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ ကော မည်သို့ ယူဆပါသနည်း။
23/08/2021 - Monday - 19;55 Pm
hive-122133 myanmar aeneas archon creativecoin proofofbrain neoxian palnet leo
ကိုယ်နိုင်ရာ HIVE ထဲမှာသာ ကျက်စား ပျော်မွေ့နေပ့တော့မည်ဗျာ။
@kachinhenry! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @tin.aung.soe.
ကျနော်ကတော့...leoထဲ invest ကို ခုအလားလာရှိတဲ့ tokensလေးတွေကိုဆဲွဖို့ ပြန်share မလားလို့ စဉ်းစားနေရပီ ကိုဟိန်းရေ...။!PIZZA
@sheinthu, sorry! You need more $PIZZA to use this command.
လေ့လာပြီး ကိုယ်အကြိုက်တွေ့တဲ့ Token တခုခုကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြည့်ပေါ့။!PIZZA
@sheinthu! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.
ကျွန်တော်လည်း အဲသလိုပဲ စဉ်းစားနေတော့တာပဲ။ Hive က ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့။!PIZZA
ကိုဟင်ခင်ဗျာ။ Starbits / CBM / Dcity တို့ကို post တင်ရင်း tag တွဲပြီး ရနိုင်လားခင်ဗျာ။ သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူစုဆောင်းဖို့ အဆင်ပြေလား ဘယ်က၀ယ်လို့ရလည်းဗျ
CBM / StarBits / D-City သုံးမျိုးစလုံး Hive ကနေထွက်လာတဲ့ Game တွေပါညီလေး ရေ... Post တင် Tag တွဲလို့ မရပါဘူး။ Game စိတ်ဝင်စားရင်တော့ တခုချင်းစီ ဝင်ကစားကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ !PIZZA
@callmemaungthan! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.
ကိုဟင် အဲ့tokenတွေကို hive engine မှမဟုတ်ဘဲ
အမှန်တော့ LeoDex နဲ့ Hive Engine က အတူတူပဲ။ ဒါပေသိ LeoDex ကလုပ်ဆောင်ရတာ နည်းနည်း ပိုမြန်တယ်။ Hive Engine token မှန်သမျှ LeoDex မှာရှိပါတယ်။ !PIZZA
Hive ထဲက တိုကင်လေးတွေပဲ မိသလောက်ဆွဲရတော့မယ်
အချိန်မှီသေးတယ်။ အများကြီး နောက်မကျသေးဘူး။ !PIZZA
Did you know PIZZA hasavery active community Discord? (4/20)
ဟုတ်ပါတယ် Hive ထဲက token လေးတွေက ကိုယ်နဲ့ ပိုပြီး အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ !LUV
@kachinhenry, you've been given LUV from @uthantzin.
ကိုယ်တွေကလည်း လောလောဆယ် ဒါလောက်ပဲ တတ်နိုင်တာကိုး။ !PIZZA
ရေစီးအတိုင်း မျောပါလိုက်ရင်း အလိုက်သင့်လေ
Crypto ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာကြီးထဲ ။
ရေစီးထဲကနေပဲ မျောပါရင်း ပျော်မယ်လေနော ဦးထွေး။!PIZZA
ဈေးကတော့ ငြိမ်နေတော့တာပါ့။ ထပ်မကျအောင်ပဲ ဆုတောင်း ရမယ်။!PIZZA
Did you know you can earn $PIZZA daily by delegating HivePower to Hive.Pizza? (6/20)
hive မှာကိုယူမနိုင်ဖြစ်နေလို့... hive ရေစီးထဲပဲမျောပါတော့မယ်.... hive ပေါ်ပိုဦးစားပေးလုပ်ပါ့မယ်...
ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ Hive မှာကိုက ယူစရာတွေ အောတိုက်ဖြစ်နေတာ ဘယ်ဟာ ရွေးရမှန်းမသိ။ !PIZZA
Did you know you can now buy Rising Star packs with $PIZZA? (7/20)
တနေ့တနေ့ hive engine ထဲက tokens လေးတွေဝင်ကြည့်ရတာအမော..
တနေ့တနေ့ အလကား ရလာတဲ့ spsတွေလည်း ဒီထက်မက ဈေးတွေတက်ဖို့ အရင်ဆုတောင်းပီးမှ ဝင်ကြည့်ရတာလည်းအမော..။!PIZZA
Airdrop ယူပြီး SPS တွေ stack လုပ်ထားတယ်ပေါ့။ ကောင်းပါလေ့ ကောင်းပါလေ့။ !PIZZA
ကျနော် leodexကနေပဲ spt 390လောက် ကိုင်ထားပေးတယ်..။